Igbo, John: Lesson 079 - Ebube ka Nna ahụ mere ka ọ dị ebube (Jọn 12:27-36) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 079 (The Father glorified amid the tumult)
4. Ebube ka Nna ahụ mere ka ọ dị ebube (Jọn 12:27-36)
27 Ugbu a, mkpụrụ obi m na-echegbu onwe m. Gịnị ka m ga-ekwu? 'Nna, zọpụta m n'oge a?' Ma n'ihi nke a ka m bịara n'oge a. 28 Nna, nye aha-Gi otuto! Otù olu we si n'elu-igwe bia, si, emewom ya otuto, M'gēnye kwa ya otuto ọzọ.
Jizọs tara ahụhụ na isi ya. Ọ bụ Onyeisi Ndụ, ma wedara onwe ya ala maka ọnwụ ịnwụ ya. Ọ bụ Onyenwe ndị nwenụ, ma o kwere ka ekwensu ahụ, onye na-achị ógbè ọnwụ, nwaa ya ike niile. Jis] s jiri obi anyi b mmehie anyi, ka anyi wee non di anyi nime kenke iwe Chineke. Ọ bụ Ọkpara ahụ, ya na Nna ya mgbe niile. Maka nzoputa anyi, Nna ya hapuru ya, ka anyi wee buru ya na ya n'amara. O nweghị onye nwere ike ịghọta ahụhụ na nhụjuanya nke Ọkpara na Nna. Ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu bụ ihe mgbu maka mgbapụta anyị.
Ahụ Kraịst apụghị ịtachi obi nrụgide a. O tiri mkpu, "Nna, zọpụta m n'oge a." Mgbe ahụ, ọ nụrụ nzaghachi nke mmụọ ahụ n'obi ya, sị, "A mụrụ gị maka elekere a: oge a bụ ihe mgbaru ọsọ nke mgbe ebighi ebi. Ndapụta nile nke Nna na-echere oge a, mgbe mmadụ ga-eme ka ya na Chineke dịghachi ná mma, ihe okike na Onye Okike. N'oge a, atụmatụ nke nzọpụta ga-emezu. "Ya mere Jisus tiri nkpu, si, Nna, nye aha-Gi otuto. Nwa ah agaghi ege nti nke an ar. O kpere n'ekpere na Mmụọ Nsọ, "Ka e doo aha gị nsọ, ka ụwa wee mara na ị bụghị Chineke nke na-atụ egwu, nke dị anya ma na-enweghị nchegbu, kama Nna na-ahụ n'anya, onye na-enye Onwe Ya n'Ọkpara iji zọpụta ndị ajọ omume na na-ala n'iyi."
Chineke egbughị oge ịza òkù nke Ọkpara Ya. Ọ zara site n'eluigwe. "Emewom aha m otuto n'ime gi, gi onwe gi bu nwa m na-erube isi ma di umeala n'obi, onye obula nke nahu gi, nahu m, gi onwe gi bu onye m huru n'anya, obi di m uto. N'elu ọnwụ gị, m ga-ekpughe ihe kacha mkpa nke ebube m n'etiti oké ifufe nke ọdachi ndụ. N'osisi ị na-ekwupụta ihe ebube na ịdị nsọ dị nsọ. Ọ bụ ihe dị ala karịa ịhụnanya na ịchụ àjà na ịhapụ onwe gị onye na-enweghị obi ụtọ na onye obi tara mmiri."
Olu olu nke eluigwe gara n'ihu ikwu okwu doro anya, "M ga-ewetakwa aha m ọzọ, mgbe ị na - ebilite n'ili ma rịgoro m, ịnọnyere m n'ebube, na - awụkwasị Mmụọ m n'ahụ ndị ị hụrụ n'anya. Ọmụmụ ihe ha na-ewetara m nsọpụrụ, omume ọma ha na-edo m nsọ: ọnwụ gị n'obe bụ ihe mere eji mụọ ụmụ Chineke. Gị ịrịọchite ọnụ n'ebube ga-abụ nkwa nke ihe ịga nke ọma nke Chọọchị. Nanị gị ka Nna na-enweghị otuto."
29 Ya mere, ìgwè mmadụ ahụ, bụ ndị guzo n'akụkụ ma nụ ya, kwuru na ọ bụ égbè eluigwe. Ndi ọzọ we si, Otù onye-ozi agwawo ya okwu. 30 Jizos zara, si, Olu a abiaghm n'ihi mu onwem, kama ọ bu n'ihi unu. Ugbu a bụ ikpe nke ụwa a. Ugbu a, a ga-achụpụ onyeisi nke ụwa a. 32 Ma ọ bụrụ na a kpọlitere m n'ụwa, m ga-adọta mmadụ niile n'ebe m nọ. "33 Ma o kwuru nke a, na-egosi ụdị ọnwụ ọ ga-anwụ.
Ìgwè mmadụ gburugburu Jizọs amaghị Jizọs na ya na Chineke na-akparịta ụka, ma chere na ọ bụ olu égbè eluigwe. Ha enweghị ike ịmata ọdịiche ma ọ bụ rịba ama nà Chineke bụ ịhụnanya, ha anụghịkwa olu ya dị nro, ma ha aghọtaghị na site na mkpughe nke ebube Chineke nime Ọkpara, ikpe ụwa amalitela.
Setan tụfuru ndị ohu ya mgbe e buliri Kraịst n'obe ma nye anyị ndụ site n'ọnwụ ya. Agbara onye ojoo ike ya site na nrube isi nke Okpara nye uche nke Nna. Jizos kporo ekwensu ah Onyeisi nke wa nke a n'ihi eziokwu ah bu na edobere uwa niile n'òkè ya. N'agbanyeghi ihe a na-egbu mgbu na ihe ilu, Jizos egbula oge, kama o jiri mma agha nke ezi omume ya tie Setan agha, na-eme ihe otiti. Anyị bụ ụmụaka ugbu a n'efu n'aha Jizọs.
A na-adọta anyị n'osisi ya. Setan kpọrọ ya asị ruo n'ókè nke na ọ gaghị ekwe ka Jizọs nwụọ n'elu ala ma ọ bụ n'ihe ndina ya, ma mee ka ọ nwụọ n'elu obe nke ihere. Mana dika agwo ahu nke weliri n'ala ozara n'oge Mosis gosiri nmehie nke Chineke nye ndi kwere ekwe, ya mere obe gwakota ikpe nile n'ubu Kraist. Chineke adịghị ama ndị na-elegide anya n'obe. Okwukwe anyi nime Kraist kposoro ayi n'obe ma me ka anyi noo n'onwu ya. Anyị anwụọla na mmehie ma dịrị ndụ maka ezi omume.
Njikọ anyị na Kraịst na-etinye anyị na ike na ebube ya. Dị nnọọ ka o meriri mmehie na ọnwụ na nsọ, ya mere ọ ga-adọta anyị n'azụ ya ma dọta anyị n'ebube ya. Ndi nile ndi nātukwasi obi na Ya agaghi-ala n'iyì, kama ha gēnwe ndu ebighi-ebi.
34 Ìgwè mmadụ ahụ zara ya, sị: "Anyị anụwo iwu ahụ na Kraịst ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Gì onwe-gi si aṅa si, Aghaghi iweli Nwa nke madu elu? Ònye bu Nwa nke madu?
Ndi Juu gbali ijide Jizos, na acho ka ha nye ha ihe ngha ta na nke doro anya ka ha wee ghara ime n'achi chi banyere eziokwu ya. Ha maara nsụgharị nkà mmụta okpukpe nke Akwụkwọ Daniel, isi nke asaa, ebe a na-akpọ Mesaịa Nwa nke mmadụ na Onyeikpe nke ụwa niile. Mana ha ka choro ka ha nuru ya site n'ikwu na Chineke bu nwa. Nke a ka ha mere, ọ bụghị itinye onwe ha n'ọrụ ma gbaa mbọ ka ha kwere, ma ọ ga-aka mma ka ha kwenye na ọ bụ onye ọ sịrị na ọ bụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị iro na-eche echiche ọjọọ na-achọ ịtọ ya ụta na ebubo nkwulu ma ọ bụrụ na o kwuru n'ụzọ doro anya na ọ bụ Nwa nke mmadụ. Jisos ekpughere onwe ya nye ndi nyocha ahu n'uzo ezi uche, kama o gosiputa onwe ya nye ndi kwere ekwe ndi kwere ekwe ndi nemeghachi Mo Nso ma kwuputa na Nwa nke madu bu Okpara Chineke, tutu ha anata ihe ngosi ezi uche.
35 Ya mere Jisus siri ha, Ọ fọduru nwa oge, ma ìhè ahu diyere unu. Na-eje ije mgbe ị nwere ìhè, na ọchịchịrị adịghị enweta gị. Onye na-ejegharị n'ọchịchịrị amaghị ebe ọ na-aga.
Jizọs bụ Ìhè nke ụwa, ịhụ ìhè ahụ achọghị nkọwa zuru ezu. A na-aghọta ya n'ihi na ndị nkịtị nwere ike ịhụ ìhè ahụ ma chọpụta ya na ọchịchịrị. Ogologo oge n'ehihie, mmadụ nwere ike ịga ije ma ọ bụ na-agba ọsọ, N'abalị, mmadụ apụghị ịrụ ọrụ. Mgbe anyanwụ na-enwu, ọ bụ oge iji rụọ ọrụ ma na-arụsi ọrụ ike. Jizos gwara ndi Juu na oge diri ha ka ha bia nime ógbè nke Ìhè maobr na ha choro. Oge ahụ chọrọ mkpebi, ịtọhapụ na ịkwụsi ike.Otú ọ dị, onye ọ bụla nke jụrụ ìhè ahụ nọ n'ọchịchịrị ma amaghị ụzọ ya. Jizọs a buru amụma banyere ndị Juu tupu oge eruo, na ha ga-awagharị n'ọchịchịrị n'enweghị ụzọ ma ọ bụ nzube ma ọ bụ olile anya. Ọchịchịrị dị otú ahụ agaghị enwe mgbagwoju anya na ọchịchịrị nkịtị nke dị n'èzí anyị. Ọ bụ ọchịchịrị dị n'ime, mmụọ ọjọọ na-eme mmadụ. O si otú a na-eme onwe ya ka obi ghara iru ya ala. Onye obula nke naadigh ekwenye Kraist bu ochichi ojoo. Ị nwere ike ịhụ, gịnị kpatara mba ụfọdụ "Ndị Kraịst" ji ghọọ ọchịchịrị n'ụwa? Ọ bụghị onye ọ bụla a mụrụ "Onye Kraịst" enyefewo ndụ ya nye Kraịst. Ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ndị Kraịst na-achịkwa. Ọchịchịrị na-emeri onye ọ bụla na-adịghị abanye n'ógbè nke ìhè. Ị gaghị enwe ike keta ngọzi nke Oziọma ahụ site n'aka ndị mụrụ gị. Ọ dịịrị gị ịnakwere, zaghachi ma nye Kraịst.
36 Mb͕e unu nwere ìhè, kwerenu n'ìhè ahu, ka unu we ghọ umu nke ìhè. Jizos we kwue okwu ndia, o we zona onwe-ya n'aru ha.
Mkpakọrịta gị na Kraịst site n'okwukwe ga-agbanwe gị n'ụzọ dị egwu. Oziọma ahụ na-enye ìhè nke ebube Chineke bụ nke dị ike karịa ọkụ ọkụ. Ma ebe ọkụ ọkụ nuklia bibiri, ìhè Kraịst na-eme ka ndụ ebighị ebi dịrị n'ime anyị, ka onye kwere ekwe wee ghọọ nwa nke ìhè na ìhè ụlọ na ọtụtụ. Ị abanyela n'ịdị nso nke njigide Kraịst jupụtara n'eziokwu, ịdị ọcha na ịhụnanya? Jizọs na-akpọ gị si n'ọchịchịrị ị banye n'ime ìhè ya dị ebube wee dịrị nsọ.
Ke enye ama eketịn̄ ikọ emi ama mbemiso enye odụkde Jeruselem, enye ikadaha odudu ke odudu mmê adaha mbon Rome mmê Herod ke ubọk. Agha ya agwụla, ikpe nke ụwa dịkwa nso. Ìhè ahu nāb͕a n'ọchichiri; a ga-azoputa ndị kwere ekwe, ndị na-ekweghị ekwe ga-efu. Esemokwu dị n'etiti eluigwe na ụwa eruola na njedebe ya. Chineke adighi amanye ndi mmadu ikwenye. Ị ghọọ nwa nke ìhè ma ọ bụ ka ị na-anọgide na-ohu nke ọchịchịrị?
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jisọs, maka ikpughe onwe gị dịka Ìhè nke ụwa. Mee ka anyi buru uzo nke ebere gi, mee anyi ebere. Mee ka anyị hụ ego, ikike na mmeri nke ụwa, ka anyị wee soro gị, ma bụrụ ụmụ nke ìhè gị.
Gịnị ka anyị ịghọ ụmụ nke ìhè pụtara?